Iapile ipad 8 vs ipad 7: Ngaba kufuneka uphucule? uthini umahluko?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Apple iPad 8 vs iPad 7: Ngaba kufuneka uphucule? Yintoni umahluko okhoyo?
Ngokukhutshwa kohlahlo-lwabiwo mali olutsha lwe-2020 ye-iPad, ngamanye amaxesha ngokudideka kudweliswe njenge 'iPad 10.2-intshi' okanye 'i-iPad 8', usenokuzibuza ukuba ingaba iiapos kufanelekile ukuba ziphuculwe ngaphezulu kongaphambili - i-2019 isiseko se-IP.
Yintoni umahluko phakathi kwezi zimbini, ucinga ukuba zikhangeleka ngokufanayo? Ngaphakathi, akunjalo? Ngaphandle kokuqhubeka, makhe singene kwezi zinto ziphuculweyo kwaye zeziphi ezihleli zinje, kwaye ubone ukuba apile & iiapos ezintsha ze-2020 ze-iPad kufanelekile ukuba ziphuculwe.
Eyona misebenzi mihle ye-iPad yokuThenga ngokuBalaseleyo, iAmazon, iThagethi kunye nokunye
Yeyiphi i-2020 ye-iPad (10.2-intshi) yokugcina endifanele ukuyifumana? 32GB okanye i-128GB?
Eyona meko ilungileyo ye-Apple iPad 2020 (isizukulwana se-8) kunye nezembozo
2020 iPad vs 2019 iPad: Ukunyusa ukusebenza
Olona tshintsho lubalulekileyo kuhlahlo-lwabiwo mali olutsha lwe-iPad kukuba ngoku inyathela i-chip ye-A12 Bionic, eyavela okokuqala kwifayile ye- I-iPhone XS uthotho ngo-2019. Enkosi kuyo, i-2020 ipad entsha inikezela nge-40% yokusebenza kwe-CPU ngokukhawuleza kwaye iphindwe kabini amandla emizobo ye-iPad ka-2019, yona ebaleka kwi-chip ye-A10 Fusion ukusukela ngo-2016.
Kwaye ngelixa i-2019 ye-iPad isetafile efanelekileyo, kodwa enye yindlela yobungqina bexesha elizayo, njengoko bekulindelekile. Kukwakhona nokukhetha okunomtsalane ngakumbi kwimisebenzi enzulu, njengokuhlela ividiyo, imveliso yomculo okanye imisebenzi yesikolo, ukongeza kwimidlalo enomdla.
2020 iPad vs 2019 iPad: Akukho mahluko ubonakalisayo
Umboniso uyafana phakathi kwee-intshi ezi-10.2-intshi ngobukhulu, i-IPS LCD, kwaye ngelishwa ayikacolwa kwimodeli ye-2020. Ukusilela kwe-lamination kuthetha ukuba kukho umsantsa obonakalayo phakathi kweglasi egubungele umboniso, kunye nesiboniso uqobo. Ngoku ngakumbi xa ubhala kunye nePensile ye-Apple, ufumana imvakalelo encinci kunye nesandi xa uchukumisa isikrini se-iPad. Kubasebenzisi abaninzi, nangona kunjalo, oku ngekhe kubonakale.
Ukuba siyayibamba imicu, uhlahlo-lwabiwo mali olutsha lwe-iPad 8 lunomlinganiso ophakamileyo (1.08%) wescreen-body-ratio kune-iPad 7, kodwa yiyo & ampos; Akukho sizathu sokuphucula ngokuqinisekileyo ngethemba lomboniso ongcono. Isakhangeleka ngokulinganayo ibukhali, intle kwaye icacile kwi-2020 iPad njengoko isenza kwi-2019 enye.
2020 iPad vs 2019 iPad: Iikhamera ezifanayo
Ewe, akukho kuphuculwa ngaphambili, nangona iikhamera ngokubanzi zingazibambi zibaluleke kakhulu kumacwecwe nangayiphi na indlela. Zombini ezemidlalo kunye nezakudala uhlahlo-lwabiwo mali lwe-iPads yemidlalo yekhamera eyi-1.2-megapixel selfie eyamkelekileyo kwi-FaceTime kwaye inokudubula ividiyo kwi-1280 x 720 HD. Ngasemva, zombini zinekhamera efanayo, ii-megapixels eziyi-8, ezinokudubula ividiyo ngo-1920x1080.
2020 iPad vs 2019 iPad: Isoftware kunye nezixhobo
Zombini iimodeli zohlahlo-lwabiwo mali lwe-iPad ngoku ziqhutywa kwi-IPOSOS 14, kodwa eye-2020 izakuqhubeka nokufumana uhlaziyo lwesoftwe kangangeminyaka eliqela, enkosi kubafundi bayo abanamandla ngakumbi. Kwaye iiapos; s kakhulu kunqabile ukuba iqale ukuthoba isantya kwiminyaka emithathu okanye emine ukusukela ngoku, ngenxa yeso sizathu sinye-i-chip yayo ye-2019 chip.
Ipensile yeApple kunye neApple Smart Ikhibhodi ziyafumaneka kuzo zombini i-iPad 7 kunye ne-iPad 8, ke abafundi baya konwaba nokuba yeyiphi na ithebhulethi yemisebenzi esisiseko yesikolo. Ii-iPads ezimbini zinamandla ngokwaneleyo ekubhaleni iincoko, izihloko zophando, inkomfa yevidiyo, ukuzoba kunye nezinto ezithandayo.
2020 iPad vs 2019 iPad: Izinketho zemibala kunye nokukhethwa kokugcina
IApple ayisiyiyo iapos; ayiniki nto kakhulu nge-iPad & apos; ukhetho lokugcina isiseko ngo-2020, njengoko i-iPad 8 entsha nayo iqala ngo-32GB wokugcina wokugcina, kakhulu njengakunyaka ophelileyo nakwiipos iPad 7. Ngeedola ezili-100 ezongezelelweyo, unokufumana i-256GB Yokugcina kwi-iPad entsha, ekwayenye kuphela ukhetho.
Akufuneki ukuba, akukho & apos akukho kugcinwa kunokwandiswa kuzo zombini ii-iPads zohlahlo-lwabiwo mali, okanye ezinye iimodeli zePad zento leyo. Izinketho zombala zikwangamaGrey, iSilivere kunye neGolide, ayisiyonto imnandi kwaye yahlukile njengokuba kunjalo Ngo-2020 i-iPad Air 4 .
2020 iPad vs 2019 iPad: Isigqibo
Ngaphandle kokuba ufuna ubungqina bexesha elizayo kunye ne-iPad enamandla, awudingi ukuphucula ukusuka kwi-iPad 7 ukuya kwi-iPad 8. Zombini zineendlela ezifanayo zoyilo, iziboniso ezifanayo ezingafakwanga laminated, izithethi ezibini ezifanayo kwicala elinye, ezingaphumeleliyo. ukuhambisa istereo esiyinyani kwimowudi yokuma komhlaba, kunye nenkxaso yePensile efanayo yeApple. Zombini zigqibelele abafundi, abantwana, okanye nabani na okhangela i-iPad enexabiso elithe kratya kwaye iiapos zisenako ukusebenza kunelaptops ezininzi.
I-Apple iPad (2020) $ 32999 Thenga kwiBestBuy $ 15 Thenga kwiVerizon $ 153. 4 Thenga kwi-AT & T
I-2020 iPad vs 2019 iPad: Iinkcukacha ngokuthelekisa ngokuthe ngqo
I-Apple iPad (2020)
10.2 intshi 10.2 intshi
I-500 cd / m2 (ubusuku) i-500 cd / m2 (ubusuku)
Ukutyabeka kwe-Oleophobic, isivamvo sokukhanya kwe-Ambient i-Oleophobic nokwaleka, isivamvo sokukhanya kweAmbient
I-Apple A10 Fusion APL1W24 Apple A12 Bionic APL1W81
I-Quad-core, 2340 MHz, iNkanyamba kunye neZephyr, i-64-bit, i-16 nmQuad-core, i-2490 MHz, iVortex kunye nesivuthuvuthu, i-64-bit, i-7 nm
IPowerVR 7XT GT7600 kunye neApple G11P
I-128GB 32GB, ayinakwandiswa
I-iPadOS (13.x) i-iPadOS (14.x)
I-LTE: iiyure ezili-9; I-Wi-Fi: iiyure ezili-10 ze-LTE: iiyure ezili-9; I-Wi-Fi: iiyure ezili-10
Ikhamera enye Ikhamera enye
I-8 MP (i-Autofocus, i-BSI sensor) i-8 MP (i-Autofocus, inzwa ye-BSI)
Ubungakanani besithuba: F2.4 Ubungakanani besithuba: F2.4
1920x1080 (HD epheleleyo) (30 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) 1920x1080 (HD epheleleyo) (30 fps), 1280x720 (HD) (120 fps)
Ividiyo ephelelwe lixesha, i-EIS yevidiyo ephelelwe lixesha, i-EIS
Ilungu le-1.2 MP 1.2 MP
9.8 x 6.8 x 0.29 intshi (248.9 x 172.7 x 7.4 mm) 9.87 x 6.85 x 0.30 intshi (250.6 x 174.1 x 7.5 mm)
iumndililiyi-16.3 oz (464 g)17.46 oz (495.0 g)
Umva: Umva weAluminiyam: IAluminiyam
Umnwe womnwe (uchukumisa) Iminwe (uchukumise)
$ 559 $ 459 Jonga iApple epheleleyo ye-Apple 10.2-intshi vs Apple iPad (2020) ukuthelekisa okanye ukuthelekisa kwezinye iifowuni usebenzisa isixhobo sethu sokuthelekisa.
I-AT & T kunye neqela leWalmart ukuya kunikezela ukufikelela ngexabiso eliphantsi okanye lasimahla kwi-intanethi kubathengi abafanelekileyo
I-iPhone ehambelana ne-Gear Fit2 Pro ayisasebenzi kwi-iOS, nantsi isizathu sokuba